Nkịtị na-egweri ọla, CBN na-egweri oghere, ebe CNC Machining- Jinyunxiang
diamond na-egweri oghere maka carbide na-ahụ ụzọ
Diamond na CBN wheel maka carbide egwe ọka
diamond na-egwe ihe eji eme ihe
ola diamond & CBN na-egwugharị wiil bi-metal gbalaga hụrụ UM UBARA
Manual igwe diamond na-egweri wheel
Igwe eji egweri egwu nke di na mpụga
ANY PR EGO ANYAL EGO
Ngwakọta ngwakọ ngwakọ maka CNC HSS tool fl ...
Ihe ndị dị na: 1. Ezi uche, ọ dị mfe ịgbanwegharị na idozigharị n'oge a na-ejighi ya 2. Ọ na-ahụ maka oke ịchacha elu elu. 3. Agaghị etinye otu ọrụ ahụ ọkụ. 4. Ugbo ala nwere ike ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ọdịdị dị iche iche. Anyị resins bond diamond na ụkwụ CBN dị larịị, iko ekara, ekara ekara, na udi cylindrical. Enwere ike iji ngwaahịa ndị a na - ejikọ ọnụ na - eme ka ndị na - egbu ihe dị iche iche dị na ya, na - agba akụkụ akụkụ, na - egbu ma ọ bụ iko, njedebe njedebe f ...
Na-egwuri egwu Wheel setịpụrụ maka CNC Machining
AKWCTKWỌ AKWCTKWỌ AKW performanceKWỌ AKW performanceKWỌ dị elu na-egweri egwu site na eriri ngwaahịa Nkọwapụta ohuru a na-enye aka ike dị egwu na oke iwepu ngwaahịa na-enweghị obere profaịlụ. ngwaọrụ igwe ihe na-ekwe gị nkwa ọ bụla kachasị maka ngwaọrụ gị na ịrụchachasị nke elu. Ihe a niile ka a na -eme ka o nwee ezigbo diamond。 Ngwa flọta nke igwe TC na igwe HSS arụ ọrụ dị elu na-egweri egwu nke igwe egbe tungsten carbide dị ala 1. 1.nwe ike nke pr ...
diamond na-egweri wiil maka iche iche na -eme…
Resin bond diamond grinding wheel na-eji na na-egweri nke tungsten carbide okirikiri ikpa. Ihe a na -efegharị agbaze bụ nke ọma, ọ dịkwa nkọ ma nwee ndụ ogologo ọrụ. A na-eji resin njikọta diamond resin njikọ maka nhazi ihuenyo kama usoro mkpachị ọdịnala n'efu. Ọ nwere ike melite arụmọrụ nhazi nke ihu ngosipụta na ogo elu, ma belata ọnụahịa.Ọ nwere ọnụego mwepụ ihe dị elu na ezigbo ihe nrị elu. Resin diamond na-egweri wiil bụ ...
diamond na-egweri ọla maka TCT carbide hụrụ bla ...
A na-ejikarị maka ige ihu ihu igwe na CNC igwe maka TCT hụrụ okpu, diamond na-egweri ọla maka ịgbachasị carbide hụrụ agba, diamond na-egwe ọka maka ngwaọrụ carbide dị ka Vollmer, Abm, Rekord..Grit dịgasị iche dabere na ngwa. Na agbanyeghị ịme blọọgụ ọhụrụ (Saw Blade Maka Plate Plate ， Saw Blade For Solid Wood ， Saw Blade For Aluminum ， Saw Blade For Special) ma ọ bụ na-agbanwegharị, na-anata ngwaahịa anyị nke ọma. Enwere akụkụ atọ dị mkpa iji gbue ezé ...
diamond & cbn na-egweri wiil maka Carbide R ...
Ngwa nke resin bond diamond grinding wheel A na-eji wiil resin diamond maka ngwaọrụ tungsten carbide, iko akpaka, PDC, PCD, PCBN, ceramik, sapphire, iko optical, na ihe ndọta. Resin bond diamond grinding wheel nwere obere mkpịsị aka, obere ihe na -eme ka ọkụ, ezigbo mmadụ na-eme ọfụma, arụmọrụ dị elu, na imecha elu. A na-ejikarị ya egbutu ya, na-egweri ihe, na-egweri ihe, na -eme ka mma. Ejirila ya n'ọtụtụ ebe maka ịhazi ce ...
Ngwunye osisi, Diamond na CBN na-egweri W ...
Ugbaala maka ndị na-akpụ nkụ na-akpụzi Matriks nwere ike ịgba mbọ hụ ma ihe siri ike ma na -echekwa uja N'obodo a na-ejikarị egweri maka ndị na-akpụ nkụ. Igwe igwe mmadụ na-egwe ọka na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa ma ụlọ na mba ọzọ maka ogo ya dị elu ma dị ọnụ ahịa ọnụahịa.Grit dịgasị dabere na ngwa. Ihe eji emezi ihe eji eme ihe dika ihe eji eme ihe dika ihe eji eme ka ndi mmadu na -eme ka ndi ozo di nkpa; Ezigbo na-enwu onwe ya, na-egweri okpomoku obere, dị mfe ikwunye, ...
Diamond na-egweri oghere maka carbide / Round Edge D ...
Diamond bụ ihe kachasị njọ n'ụwa. Ihe isi ike ya, iyi ya na nguzogide ya mere ka diamond jiri abrasive kachasi nma ghapu igwe dika: * Matel siri ike * Tungsten Carbide * Ihe eji akpo ya nku * Ihe anakpo * Ihe silicon * Igwe ihe eji eme ya acho ihe eji eme ya. : Resin bond diamond grinding wheel Vitrified / Ceramic diamond na-egweri wiil Metal bond diamond egweri wheel. Mgbe ị mere…
Semi-akpaka egweri igwe diamond egweri ...
Wheeldị igwe ihe a dị mma maka iji igwe na -eme ihe dị na igwe eji eme ihe, ọ dị mma maka ụlọ nrụpụta ngwá ụlọ ma ọ bụ ndị nrụpụta ọrụ pụrụ iche na nhazi nke eriri alloy. Diamond wheel with Bakelite Body Diamond wheel with Bakelite body with ezigbo elasticity, eji na ulo oru osisi, free cut and long life Diamond wheel with Bakelite ahu maka cylindrical grinding, elasticity, sharpness and exactly 4 inch diamond ahaziri ， 5 inch diamond cu ...
Shijiazhuang Jinyunxiang Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara na resin-bonded na super hard material wheel and CBN grinding wheel. Ihe karịrị afọ iri mmepe, anyị ghọrọ onye isi nke na-emegharị wiil. A na-eji ngwaahịa eme ihe n'ụzọ sara mbara n'usoro mmepụta nke narị otu narị nke ụlọ na mba ofesi. Dabere na njikwa ịkwụwa aka ọtọ, idebe okwukwe, izizi, ịdị ebighi ebi, anyị ga-achọ ịnye ngwaahịa dị ọnụ ahịa, nke na-agbanwe agbanwe na nke ruru eru.
A na-ekewa wiilta Diamond na seramiiki, resin, metal iron, electroplating, brazing, wdg.
1. Resin bond grinding wheel: ezigbo onwe-nkọ, ọ dịghị mfe igbochi, mgbanwe, na ezi polishing, ma ozu ozu nwere ike adịghị mma, jidesie nke diamond na ozu, adịghị mma okpomọkụ na-eyi ndị na-eguzogide, ya mere, ọ bụghị adabara na igwe mkpị e siri ike, adịghị mma maka ọrụ dị arọ g ...
Igwe igwe ihe na-egweri egwu
Igwe na-enweghị etiti bụ usoro OD (nke dị na mpụta). A na-eji wiil igwe na - egwe ihe na - agbanyeghi egweri nke workpieces. :Dị: 1A1, 6A1, 9A1 Ngwa: Ogwe carbide ciment, Polycrystallin 1.Papụta Aha ： Diamond Centerless Grinding Wheel, wheel grainding wheel, Resin Diamo ...
Dị iche iche ngwa nke egweri wiil
Diamond / CBN wiil maka njikọ CNC Grinder Resin bond, diamond dị elu, teknụzụ pụrụ iche, ejiri na 5-axis CNC grinders maka mkpịsị igwe tungsten carbide ma ọ bụ ngwaọrụ HSS alloy steel Diamond / CBN Wheel for Profile Grinding Profaili diamond na CBN wheel maka ihe dị iche iche dị ka steetụ siri ike ...
Igwe na-egweri: Size: 100 * 20 * 16100 * 30 * 16 Ihe: log CBN hụrụ ya mgbe ejirichara igwe na-egwuri egwu nke ụlọ ọrụ mepụtara, ọ nwere ike iru oke dị elu. Ya mere, mgbe ịbechara, mpịcha mpempe akwụkwọ ahụ enweghị akụkụ siri ike, scars na onu ojii. na-ebunye pupụtara maka ndị a na ...
Hụrụ agụba na-egweri
N'ihe banyere igwe eji eme otutu ahihia, otutu ihe na-acha odo odo na-emetuta mmezi nke oru ya na onu ahia ya. N'oge eji agụba ahịrị, ogo nke egweri ahụ ga-emetụta ogo nke ahịhịa ahụ ọzọ. Mkpa ya pụtara onwe ya. Na p…
Nke 115, Tabei Road, Yuhua Distrcit, Shijiazhuang City, Hebei Province
Green Wheel Maka Nkọcha Carbide, Diamond / Cbn Clearance Angle na-egwe ọka maka ngwaọrụ ndochi, Na-egweri Ube N'ihi Ngwaọrụ Carbide, Carbide Circle Saw Blade Maka Mgbu osisi, 5inch Resin Bonded Wheing For Sharpening Carbide Tools Karfe Disc, Diamond na-egweri ọla maka Tungsten Carbide,